Hey’addee Maamuleysa Lacagta doorashada 2016-ka? – Goobjoog News
Hey’addee Maamuleysa Lacagta doorashada 2016-ka?
in featured, Madaxweynaha 9-aad, Wararka Dalka
Guddiga hirgelinta doorashada dadban ee dalka waxaa ay ku dhawaaqeen in xubnaha u tartamaya labada aqal lacagta murashaxnimada ay ku shubi-doonaan Bangiga Dahabshiil account: 104104638, hadaba waa su’aale yaa lacagtaas maamulaya? sidee loo isticmaalaa, waxaa intaa oo dhan ka muhiimsan: waa imisa wadarta guud ee lacagta doorashada? inta soo hartase yaa qaadanaya?!!
Lacagta doorashada marka lagu shubo Dahabshiil account ee 104104638, waxaa la sheegayaa in loo wareejin doono Akoon ay leedahay hey’adda UNDP taas oo si rasmi ah u maamuli doonta lacatga doorashada dadban ee Soomaaliya 2016-ka!!
Lacagta Murashaxiinta laga qaadayo waxaa loola jeedaa: in dad badan aaney isa soo sharaxin, in lacagtaas, 70% lacagta ka soo xarooto labada aqal waxaa lagu qarash-gareen doonaa dowlad goboleedyada iyo goobaha ay doorashada ka dhacesyo halka 30% la siin doono guddiga doorashada ee heer federal.
Haweenka Labada Aqal: Haweenka waxaa laga qaadi doonaa aqalka hoose $2500 oo ah 50% lacagta ragga laga qaado, halka aqalka sare laga qaadi doono %5000 oo sidoo kale u dhiganta 50$ inta ragga laga qaadayo.
Su’aasha ugu qatarsan waa haddii lacagta doorashada 2016-ka ee lagu sheegay 14 Milyan, hadana ay guddiyada doorashada dhahaan waxaa u baahannahay lacag intaas ka badan?
Amniga Magaalada Garoowe Oo La Adkeeyay
Burcad Dhacday Ganacsato Soomaaliyeed Oo Lagu Dilay K/Afrika
Somaliland: Xoolo Farabadan oo Ku L'aday Roobab Xoog leh oo Ka Da'ay Deegaanka Dallow